Antony 6 hamerenana amin'ny laoniny ny bilaoginao WordPress | Martech Zone
Zoma, Jolay 19, 2019 Zoma, Jolay 19, 2019 Bryan
WP Haverina dia plugin iray ahafahanao mamerina amin'ny laoniny ny tranokalanao na amin'ny ampahany na amin'ny ampahany ihany amin'ny bilaoginao no tafiditra ao anatin'ny fanovana. Ny famerenana feno dia mazava tsara, manaisotra ny lahatsoratra rehetra, pejy, karazan-doka manokana, tsikera, fampitam-baovao ary mpampiasa.
Ny hetsika dia mamela rakitra media (fa tsy manisy lisitra azy ireo amin'ny media), ary koa ny fampidirina toa ny plugins sy ny fampidinana lohahevitra, miaraka amin'ireo toetra mampiavaka ny tranokala - lohatenin'ny tranokala, adiresy WordPress, adiresy tranokala, fitenin-tranonkala , ary ny fikirana fahitana.
Raha misafidy famerenana ampahany ianao dia izao no safidinao:
Transients - voafafa ny angon-drakitra mandalo rehetra (ao anatin'izany ireo transients tsy lany daty ary ireo fidiran'ny fotoana maharitra kamboty)
Ampidiro ny angona - voafafa ireo rakitra rehetra nakarina tao amin'ny C: \_ folder \_ htdflix \_ wp \_ wp-content \_ uploads
Safidy lohahevitra - mamafa ireo safidy sy mod ho an'ny lohahevitra rehetra, mavitrika sy tsy miasa
Famafana ny lohahevitra - mamafa ny lohahevitra rehetra, tsy misy afa-tsy ny lohahevitra WordPress misy anao
Plugins - voafafa ny plugins rehetra ankoatry ny WP reset
Latabatra manokana - voafafa daholo ny latabatra fanao misy ny prefidy wp_, fa ny latabatra fototra rehetra sy ireo izay tsy manana awl wp_ dia mijanona
rakitra .htaccess - mamafa ny fisie .htaccess hita ao amin'ny C: /folder/htdflix/wp/.htaccess
Zava-dehibe tokoa ny manamarika fa ny hetsika rehetra dia farany ary tsy azo ovaina, na aiza na aiza no halehanao, dia alao antoka alohan'ny tsindrio ilay bokotra.
Raha manontany tena ianao hoe inona ny toe-javatra mety mitaky famerenana bilaogy / tranokala, aza manahy. Nanangona lisitry ny antony enina fahita indrindra izahay izay mety miteraka an'io hetsika io. Raha tsy misy resaka intsony dia zahao raha mitera-doza ny famerenanao ny bilaoginao:
Ny iray amin'ireo antony voalohany tonga ao an-tsainao rehefa misaintsaina ny famerenana bilaogy dia rehefa mifindra avy eo an-toerana / tsy miankina amin'ny besinimaro. Rehefa manomboka eo amin'ny sehatry ny fampivoarana tranonkala ianao, na ny fitantanana bilaogy fitantanana ny filokana tsara indrindra anao fotsiny aza dia ny manomboka amin'ny zavatra izay tsy misy fahasimbana mety hitranga. Na tranokala eo an-toerana io na an'ny tsy miankina dia tsy maninona izany, ny zava-dehibe dia ny manandrana izay rehetra azonao atao sy mahita ny fiarahan'ny zava-drehetra - plugins, scripts, lohahevitra, sns. tonga ny fotoana hanaovana ny switch mankany amin'ny tena fifanarahana matetika kokoa noho ny tsy tianao hatao izany amin'ny takelaka madio.
Koa satria manomboka ary manao fanandramana be dia be, amin'ny fianarana mangataka raha ny fandehananao dia tsy maintsy misy fitambaran'ireo singa mifanipaka manerana ny solaitrabe. Mety hisy, ireo olana ireo dia hiorim-paka ao amin'ny fototra ka ny fomba mora hanombohana vaovao dia ny famerenana azy any amin'ny mpangataka. Miaraka amin'ny fahalalanao vaovao dia ho afaka hanomboka hisoroka ny hadisoana rehetra ianao mialoha.
Lozisialy feno olona
Manaraka ny bilaogy fianarana / andrana, misy tranga izay mety hipoiran'ny olana mitovy amin'izany amin'ny bilaogy efa velona. Mety ho marina indrindra izany amin'ny tranga izay nijanonan'ny tranokala hatry ny ela ary, tamin'izany fotoana izany, dia nanome atiny maro isan-karazany. Ny fitsipiky ny ankiben-tànana dia ny arakaraky ny atiny omenao, ny rindrambaiko ambany kokoa ilainao hanohanana azy rehetra.
Manome tranokala ianao, mila plugin ianao Raha te hampandeha azy ianao dia mila fisoratana anarana hijerena ny sasany na ny atiny rehetra, mila plugin ianao, manana fizarana isan-karazany misy atiny hafa tanteraka amin'ny pejy misaraka, mila lohahevitra marobe hampiavaka azy roa ianao. Mandeha hatrany ny lisitra.
Mety hampiditra fampidirana fotsiny araka ny ilainao azy ianao, tsy manahy fa betsaka amin'ireo sisa tavela sy afaka mifanipaka amin'ireo vaovao ampiharinao. Fametrahana vahaolana isan-karazany, na plugins mifangaro izany, na serivisy ivelan'ny tsirairay, rehefa mandeha ny fotoana dia mety ary mety hiteraka korontana.
Voalohany ho anao amin'ny backend ary ny farany ho an'ny mpitsidika anao eo anoloana. Raha izany no izy, raha ny marina, dia efa tara loatra amin'ny zavatra hafa rehetra fa famerenana tanteraka. Averina indray, mety azo ampiharina ny vahaolana isam-batan'olona, ​​saingy vao maika manakiana kokoa ny fanaovana ilay asa haingana satria misokatra ho an'ny besinimaro ilay tranonkala. Satria ny ankamaroan'ny tranokala sy bilaogy ankehitriny dia manana, farafaharatsiny, karazan-tahiry fototra sasany, aorian'ny famerenanana dia mety ho tafavoaka haingana amin'ny tany ianao.
Fanovana ny làlan'ny atiny
Drastic fanovana ny atiny na ny endriny Mety ho antony tianao hamerenana ny bilaoginao ihany koa. Rehefa mivoatra ianao, dia toy izany koa ny bilaoginao sy ny atiny avoakanao. Raha mbola misy kofehy iraisana ao aminy dia afaka mandroso hatrany ianao, fa indray mandeha kosa dia mihodina izay mety tsy ho vita.
Angamba te hampihorohoro ny zavatra ianao, angamba ny atiny avoakanao dia amin'ny fotoana nanoratana azy (manaraka fanentanana ho an'ny vokatra vaovao ohatra) ary tsy mihatra tsotra izao. Na inona na inona antony mahatonga ny fanovana dia misy ny tonga fotoana izay tsy ilaina ny mifikitra amin'ny atiny izay tsy ilainao ary ilaina ny fanombohana vaovao.
Hatramin'ny famerenanao ny tranokalanao dia hamafa tanteraka ny arisivan'ny atiny navoaka (ny lahatsoratra sy ny pejy rehetra) miaraka amin'ny farany sy tsy azo ivalozana dia mila mieritreritra mafy ianao alohan'ny hidiranao amin'ity lalana ity. Ireo antony roa voalaza teo dia mifototra amin'ny teknolojia kokoa noho ny zavatra hafa (rindrambaiko mba ho marimarina kokoa). Ity iray ity, na izany aza, olana lehibe kokoa noho ny filàna ary noho izany dia mila drafitra fohy lavitra sy lavitra kokoa ho an'ny bilaogy, ka avereno indray - mieritrereta tsara ary mieritrereta tsara alohan'ny hihetsika.
Manidy ny bilaoginao
Mifanaraka amin'ny antony mifototra amin'ny atiny aloha, ity dia manaraka eritreritra iray hafa. Ny fanidiana ny bilaoginao na inona na inona antony dia tokony hiarahan'ny hetsika sasany hiarovana amin'ny fanararaotana diso. Alao an-tsaina ny fananana zavatra nanjavona taona maro taorian'ny nahafatesan'ny bilaoginao sy nampiasaina tamina fomba izay tsy ninianao natao fotsiny fa nanimba. Mba hisorohana ny toe-javatra toy izao dia tsara raha hamafana ny vato fisaka alohan'ny andehanana ivelan'ny Internet ho soa.
Ankehitriny, fantatsika rehetra fa na inona na inona hita amin'ny tranonkala dia mijanona eo mandrakizay amin'ny endriny iray na amin'ny endriny hafa, saingy tsy tokony hapetrakao amin'ny lovia volafotsy ny atiny. Ny famerenana ny bilaoginao dia midika fa voafafa ny arisiva feno ny atiny voalohany nakarina tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy pejy. Midika izany fa raha tsy hoe nisy olona nitahiry teo an-toerana ny atiny rehefa navoaka voalohany, dia ho sarotra ny hamonjy azy.
Toy ny efa nolazainay fa ny fanesorana tanteraka zavatra amin'ny internet dia tsy azo atao, saingy amin'ny hetsika kely vitsivitsy fotsiny, ny famerenana ny lohalaharana amin'izy ireo dia samy miaro ny tenanao sy ny fanananao ara-tsaina. Ho fanampin'izany dia tsy mila mamafa ny bilaoginao tanteraka ianao, fa tsy mametraka azy io amin'ny fiatoana maharitra na maharitra izay azonao averina any aoriana. Tsy ho afaka hanohy avy amin'ny toerana nijanonanao fotsiny ianao, fa hisy kosa ny fototra mafy hiarahanao miasa.
Hatramin'izao, ny antony rehetra dia noho ny tsy fahafaham-po, ny fanapahan-kevitry ny orinasa, na ny filaminan'ny saina. Misy, indrisy, ireo antony tsy dia ilaina loatra noho ny filana mamerina mamerina tranokala. Fantaro fa nampiasa ny teny hoe "mila" fa tsy "mila" izahay. Raha nisy ny fanitsakitsahana ny fiarovana sy ny tranokalanao ary marefo ny atiny ao anatiny dia tena "mila" mandray fepetra mifanaraka amin'izany ianao. Manova, manavao ary manavao ny anao toe-javatra fiarovana Mazava ho azy fa ny zavatra voalohany tokony horesahinao, saingy tsy izy irery ihany.
Efa niresaka izahay fa amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia misy endrika backup na dia ireo mpanome sehatra fototra aza, noho izany ny famerenana feno dia tsy zavatra tokony hatahoranao. Miaro ny tenanao sy ny bilaoginao ary ny atiny amin'ny fanaovana azy ianao amin'ny fandrahonana efa nitranga sy ny fandrahonana mety hitranga.
Toa lasa ratsy kokoa hatrany izahay, saingy ireo no antony rehetra mety hihaonanao ka mety hahatonga anao hiala sasatra amin'ny tranokalanao. Tahaka ny fanitsakitsahana ny filaminana, rehefa miatrika hetsika ara-dalàna (izay farany, tsy eo an-dàlana ihany) dia tsy dia misy azonao atao loatra fa manara-dalàna rehefa lany ny loharano hafa rehetra.
Na inona na inona baiko nomenao, ny ankamaroany dia ny fanakatonana ny bilaoginao / tranokala, fahendrena ny manao famerenana feno alohan'ny hanarahanao azy. Izahay dia efa niresaka momba ny antony maha-zava-dehibe izany sy ny fomba fampiasana azy amin'ny fomba tsy tianao raha tsy mitandrina tsara amin'ireto karazan-javatra marefo ireto ianao.
Ny tsipika fiasa marina amin'ireo toe-javatra ireo dia ny filaminana-reset-mandeha amin'ny Internet. Ny fanarahana izany dia afaka mamonjy farafaharatsiny zavatra iray amin'ny toe-javatra efa ratsy fa tsy hanao ratsy kokoa noho ny taloha intsony.
Ary eo ianao no manana azy. Ireo antony enina voalohany izay itiavanao hamerina ny tranokalanao, na amin'ny fomba feno na amin'ny ampahany. Raha nahita ny tenanao tao anatin'ny iray tamin'ireo toe-javatra voalaza etsy ambony ianao, angamba fotoana tokony handinihana hetsika toy izao, na dia toa sarotra be aza izany. Indraindray ny fepetra toy ireny ihany no sisa.
Tags: mamerina wordpressWordPressplugin WordPress